संसदीय दलमा देउवालाई नदिने तयारी « Khasokhas Follow @khasokhasmag
रमेश, मधुसुधन काठमाडौं |कांग्रेस संसदीय दलमा कमजोर उपस्थिति भए पनि नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष सभापति शेरबहादुर देउवासँग निर्वाचन भिड्ने मनस्थितिमा छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले दलको नेतामा दाबी प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।
आफू उठ्दा समस्या नहुने भए पनि अर्को कुनै नेतालाई अघि सार्दा आफ्नो पक्षमा असन्तुष्टि बढ्ने भएपछि देउवा आफैँ अघि बढ्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
पौडेल पक्षमा दुई आकांक्षी
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित रामचन्द्र पौडेल सबै किसिमका संसदीय प्रतिस्पर्धाबाट स्वतः बाहिर छन् ।
उनको पक्षबाट संसदीय दलको नेतामा महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह आकांक्षी देखिएका छन् । दुवैले सार्वजनिक रूपमा आफू दलको नेतामा दाबी पेस गर्ने बताएका छन् ।
कोइराला सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन हुने अवस्थामा मात्रै दाबी पेस गर्ने पक्षमा छन् । आफू दलको उम्मेदवार भएमा प्रस्तावक पार्टी सभापति देउवा हुने कोइरालाले सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् ।
उनले अघिल्लो साता नवलपरासीमा आयोजित कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘म दलको नेता भएँ भने मेरो प्रस्तावक सभापतिजी हुनुहुन्छ ।’
तर, नेता सिंहले भने सार्वजनिक रूपमै प्रतिस्पर्धामा आफू उम्मेदवार हुने बताउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार पौडेल पक्षका भएपनि कोइराला परिवारनिकट सांसदहरूले सिंहलाई उम्मेदवार बनाउन चाहिरहेका छैनन् ।
‘अब पुरानो संस्थापन पक्षको नेतृत्व कोइराला परिवारबाट कसैले गर्ने हो, पौडेलले गर्ने होइन,’ स्रोत भन्छ, ‘पौडेल आफैँ सांसदमा पराजित भएकाले महामन्त्रीसमेत रहेका डा. कोइरालाले नै दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । सिंहलाई उम्मेदवार बनाउने होइन ।’
स्रोतका अनुसार पौडेल पक्षका सांसदहरू कोइरालालाई सर्वसम्मत नेता बनाउनुपर्ने र निर्वाचनमा जानुपरे सिंहलाई दलको नेतामा उम्मेदवार बनाउन चाहिरहेका छन् ।